Osmaniye Düziçi Düldül Mountain Cable Car Project vita sonia (Vaovao manokana) | RayHaber
HomeANKAPOBENYVaovao manokanaNisy fifanarahana natao ho an'ny tetikasan'ny tetikasa cable cable Osmaniye Düziçi Düldül (Vaovao manokana)
22 / 12 / 2017 Vaovao manokana, Railway, ANKAPOBENY, Headline, TORKIA
Nosoniavina ho an'ny tetikasa manokana ny osmaniye duzici duldul fifanarahana fifanintsanana an-tendrombohitra
Ny sonia dia nosoniavina ho an'ny trano lehibe izay natsangana tao amin'ny Tendrombohitra Duldul, izay any amin'ny sisintanin'i Duzici any Osmaniye. Taorian'ny fifanarahana nosoniavin'ny Bartholet AG - Firoboroboana Grand Yapı Teleferik, izay fialan-tsasatra tsara indrindra amin'ny fizotry ny varotra dia hanomboka ny asa fanorenana mandritra ny herinandro ho avy. Ao anatin'ny tontolon'ny tetikasa 58.150.000 TL, ity toerana ity dia iray amin'ireo toerana tiany indrindra amin'ny faritra miaraka amin'ny fiara fitaterana, ny faritry ny lantom-piverenana ary ny toeram-pivoizana skiing izay tokony hatao any an-tampon'ny Tendrombohitra Düldül.
Barholet orinasa miorina nanambara tao amin'ny Torkia General Manager Ahmet Couldnt: Zavatra mba Ski manandratra, fialam-boly faritra sy Düziçi amin'ny nomanina Ski Resorts dia tena manan-danja ho foibem-manintona. Ny orinasa, izay afaka mitsidika olona an'arivony 5 isan'andro, dia handray anjara amin'ny toekaren'i Osmaniye. Ny orinasa Swiss Barholet, izay mitondra varavaran'asa vaovao ary manolotra endrika manokana ho an'ny tetikasa izay orinasa mpanao simenitra, dia miasa amina firenena rehetra manerantany miaraka amin'ny tetikasa mitovy amin'izany. Ilgaz ao Torkia aloha sy nilaza fa fahombiazana amin'ny tetikasa Vadinstanbul Ahmed Erbil, hoy izy ireo dia mizara ny tsipiriany momba ny tetikasa ho ela. Ny tetikasa 1,5-2 dia ho vita sy hanokafana mandritra ny taona.
Inona no raketin'ilay tetikasa?
Ny tetikasa dia hotontosain'ny tanànan'i Düziçi ao Osmaniye ary ny tetikasa dia hatao amin'ny dingana voalohany amin'ny Tendrombohitra Düldül ao Amanoslar. Ny faritra dia hovana ho toeram-pialan-tsambo miaraka amin'ny fiara fitaterana cable izay hapetraka avy amin'ny 29 arivo metatra 2 mankany amin'ny tampon'ny metron 200 arivo 90. Miaraka amin'ny trano goavam-be izay mety ho olona 5,4 eo ho eo, dia ho eo amin'ny 400 kilometatra eo ho eo ny rafitra ary mihoatra noho ny XNUMX olona afaka mitondra any amin'ny tampony mandritra ny adiny iray.
Düziçi ben'ny tanàna hoy ny fanambaran'i Ökkeş nalaza, belitti hanorina ny fialam-boly faritra am-tampony. Namlı nilaza fa hisy toeram-pisakafoanana, trano fisakafoanana ary fialam-boly eto amin'ity faritra ity ary nilaza ihany koa izy fa mikasa ny hanokatra trano fandraisam-bahiny amin'ny olona 6 izy ireo fa tsy tranom-bahiny hanorina ao amin'ny faritra metatra metatra toradroa.
Düziçi Düldül Mountain Nature sy ny fizahan-tany ara-panatanjahantena ririnina…
Fanamarihana Tender: Düziçi Düldül Mountain Nature sy ririnina…
Fampandrosoana manan-danja ao amin'ny Tetikasa Car Cable Düldül Mountain
Governemanta Coşkun, Fialam-boly arkeolojia sy fiara tariby any Düziçi…
Osmaniye - Zorkun Teleferic Project hatao
Osmaniye'de vehivavy antitra tamin'ny fotoana nianjeran'ny fakantsary fiaran-dalamby
Osmaniye-Kadirli fiaran-dalamby tetikasa marika 6…
Fanamarihana amin'ny fangatahana: Osmaniye - fiantsonana Fevzipaşa…
Fanamarihana Tender: Adana- İmamoğlu- Kozan-…
Fiarandalamby mandeha eny an-dalamby eo anoloan'ny station Osmaniye
Lalana Fifandraisana Kahramanmaraş Osmaniye OK
Kayaş Yerköy YHT Project Superstructure and Electromechanical…
Tetikasa fiarandalamby haingam-pandeha ambony ao Ankara-Izmir Eşme-Salihli Section…
Mifandraisa mivantana amin'i Ökkeş
Düldül Mountain Cable Project
Ny làlan'ny metro vaovao any Istanbul dia mampitombo ny fahalianana amin'ny faritra
Androany amin'ny tantara: 23 Desambra 1888 Haydarpasa-Izmir ...